Atletico Madrid Oo Ku Biirtay Loolanka Loogu Jiro Xiddiga Chelsea Timo Werner
HomeWararka CiyaarahaAtletico Madrid oo ku biirtay loolanka loogu jiro xiddiga Chelsea Timo Werner
October 4, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska 0
Atletico Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay kula biirtay Bayern Munich iyo Borussia Dortmund tartanka loogu jiro saxiixa Weeraryahanka Timo Werner inta lagu jiro xagaaga soo aadan marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa si joogta ah ugu ciyaarayay Blues tan iyo markii uu ka yimid RB Leipzig bishii July 2020, isagoo saftay 60 kulan tartamada oo dhan, isagoo gacan ka geystay 14 gool iyo 16 caawin.
Mustaqbalka fog ee Werner ee Stamford Bridge ma cadda, in kasta oo, tababaraha Chelsea Thomas Tuchel uu u muuqdo inuu doorbidayo xulashooyinka saddexaad ee ugu dambeeya garoonka.
Weeraryahanka ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedkan kulankii Southampton Sabtidii, laakiin way ku adkaatay inuu muujiyo joogteyn tan iyo markii uu u dhaqaaqay England.
Warbixin dhowaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in Bayern iyo Dortmund ay labaduba aad u xiisaynayeen 25-jirkan, sida laga soo xigtay TransferMarketWeb , sidoo kale waxaa jira xiiso dhab ah oo uga imaanaya Atletico.
Werner ayaa laga yaabaa inuu ka boxo liiska hore ee Chelsea gaar ahaan imaanshaha Romelu Lukaku oo durba saameyn ku yeeshay.